Shina: Horohorontany nahatratra ny hery 7.8 izay tsapa saiky manerana an’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2008 12:57 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, বাংলা, Español, English
Tokony ho ora roa lasa izay, dia nisy horohorontany izay nahatratra ny hery 7.8 eo amin'ny metatry Richter [7,0-7,9 heverina ho toy ny horohorontany henjana izay mety mahatratra 18 isan-taona maneran-tany, sy ranomasina] izay nandona ny faritra Atsimo Atsinan'i Shina, dia ny faritanin'i Sichuan, izay tao amin'ny fivondronan'ny Wenchuan ny fototr'izany horhorontany izany, ary tsapa hatrany amin'ny faritra lavitra toy an'i Beijing sy Hong Kong izany horohorontany izany [>1'500 km].
FANAMPIM-BAOVAO : Talata 09:00 ora maraina : napariaky ny vohikala QQ ireo lahatsary rehetra voaray avy tamin'ireo mpampiasa azy izay monina any amin'ireo faritra rehetra voakasika; azo arahina eto ny ankamaroan'ireo lahatsary ireo. Ny lahatsary manaraka etsy ambany kosa dia voaray avy tamin'i Gary, saingy tsy fantatra kosa izay toerana nakany izany sary izany :
Araky ny re dia tsapa hatrany amin'ny faritra lavitra toa an'i Beijing, Tianjin, Chongqing, parts of Hebei, Shanxi, Shaanxi, Sichuan, Gansu, Henan, Ningxia ary Jiangsu izany horohorontany izany.
Jereo etsy ambany ireo fanampim-baovao isam-paritra.
Avy tamin'ny vohikala mitahiry sy fanapariahana Tudou, sary avy any Chengdu izay renivohi-paritr'i Sichuan, napariak'i napariak'i danta1990 :
Efa navondron'i Danwei ireo fanampim-baovao maro voaray avy famin'ny fototra samihafa, toy ny blaogin'i Shanghaiist, sy vaovao mikasika ny mpaka lahatsary avy Sichuan izay faingana mihitsy tamin'ny fametrahana izany ho lohalaharana amin'ny renipejiny.
Ity lahatsary iray manaraka ity dia hita tao amin'ny vohikala 56.com ary nalefan'i Little Fish [trondro kely] izay monina any Wenchuan, faritr'i Sichuan :
Avy tamin'ny vohikala mpampariaka lahatsary Youku.com ity manaraka ity, nalefan'i xiaoyu82528, ahitana ny fiantraikan'izany horhorontany izany any amin'ny faritra lavitra toa ny renivohitra Beijing :
Toa ny fampiasana ny vohikalan-tseratsera Twitter no isan'ny ireo fototra loha-laharana amin'ny fanolorana ireo antsipirian'ireo vaovao tselatra raha ny toe-draharaha hatramin'izao no dinihina; Marobe ireo izay mitatitra ireo fahasarotana maro izay sedrainy amin'ny ezaka ataony hifandraisana ara-telefaonina amin'ireo olom-pantatra izay monina anilan'ny ivon'izany horohorontany izany, hatramin'izao anefa dia ohatry ny mbola mandeha ihany ny Aterineto. Kaiser Kuo izay mpiangaly solosaina rainindahiny monina any Beijing dia mitatitra fa tsy azo vangiana ankehitriny ny vohikalan'ny Sampandraharaham-panjakana miandraikitra ny horohorontany, heveriny fa nohon'ny hamaroan'ireo mpamangy no anton'izany.
Inwalkedbud sy Lyrrael dia samy nanolotra fanampim-baovao amin'ny teny anglisy, arak'izay azony natao. River Crab Goes Ashore indray dia nanangona ireo fanampim-baovao farany anivon'ireo blaogy amin'ny teny Shinoa ampiantranoan'ny vohikala Fanfou.
Inwalkedbud monina any Chengdu, izay tena manamorona ny ivon'ity horhorontany ity no manoratra : “Tsy dia mahatsikaritra fahavoazana firy anivon'ireo tranobe aho, saingy tena raiki-tahotra ny mponina. Ary ohatry ny samy mbola mandeha daholo na ny Herin'aratra / na ny rano / na ny gazy.”
Tsy tsara vitana toy izany ireo faritra sasany hafa; Raine Shinoa monina any Hubei no manapariaka amin'ny alalan'ny vohikala Twitter fa mety misy faharavana any amin'ny faritra izay misy azy :
Mpiara-miasa iray no ninatso tany Jingzhou any amin'ny faritry Hubei, toa trano maro no indray nirodana any Shashi, fahavoazambe no hita any.
Danwei koa dia tsy mitsahatra mamory ireo hafatra samihafa niseho tao amin'ny vohikala Summize.com, vohikala fikarohana ireo hafatra Twitter izay mizaka tanteraka ny sotra shinoa; ireo fanampim-bovao samihafa izay voangona avy amin'ny vohikala Summize sy toerana hafa koa dia samy hangonina ao dieny izy ireny fantatra. Azo jerevana Photos ao amin'ny vohikala Flickr ampiana ny fototeny fikarohana ‘earthquake’ [horohorontany] amin'ny teny Anglisy sy Shinoa ary koa ao amin'ny vohikala Yupoo.com.
Ianareo rehetra izay mety hanana fanampim-baovao mikasika an'i Shina dia iangaviana mba hametraka ny lohatenin'izany ao amin'ny hafatra izay apetrany.
Fanampim-baovao arak'ireo Blaogim-paritra:
Sarin'ny faharavana any Jiangyan, Jiangsu faritanin'ny Dujiangyu, isan'ireo faritra izay nisedra faharavana henjana indrindra arak'izay vaovao voaray farany. Ahitana ny vatan'ireo olo-maro namoy ny ainy.
Alatsinainy 21:52 ora http://jiwai.de/IQ%E5%B0%8F%E5%AD%90/statuses/8802456
Ny vohikala izay ahitana ny “lisitr'ireo horohorontany” amin'ny teny Anglisy dia efa ahitana vaovao mikasika ny horohorontany vao niseho tany Sichuan sahady, misy mihitsy aza lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “horohorontany tany amin'ny faritanin'i Sichuan tamin'ny taona 2008.” Mandritra izany ftoana izany, tsy mbola ahitam-baovao ny vohikalam-pahalalana Wikipedia amin'ny teny Shinoa.
Alatsinainy 22:40 ora http://jiwai.de/doggienest/statuses/8803411
Efa afaka mandray antso an-telefaonina amin'izay izao ny mponina any Chengdu
Alatsinainy 22:25 ora http://ledao.in/blog.php?blog_id=156
Lalana mankany Jiuzaigou no misy ny tananan'i Wenchuan; ary feno tendrombohitra sarotra ianihana iny faritra iny. Nohon'ny fitrandrahana be loatra dia simba avokoa ny ankamaroan'ireo voly any amin'iny faritra iny sady any koa no andalovan'ny renirano Min, izay nampitombo fatratra ny lozan'ny fihotsahan'ny tany ka vao mainka nanampy trotraka iny faritra iny amin'ny nisehoan'ny loza ara-jeolozika. Tena nahatsiravina mihitsy tany.
Ny anjerimanontolon'ny Sichuan dia nandidy ireo mpianatra tsirairay avy mba handao ny toeram-pandriany, taorian'ireo horohorontany fanampiny nitranga tokony ho tamin'ny 16:00 ora hariva tany ho any.
Toa hoe mandeha hono ny rohintserasera mampiasa ny teknolojia CDMA sy ireo finday any amin'ny faritr'i Sichuan
Mikatona ny seranam-piaramanidina any Chengdu. Mitodi-doha ho any chongqing ireo fiaramanidina rehetra izay mizotra ho any Beijing
Alatsinainy 17:30 ora https://twitter.com/Aether/statuses/809193571
Miverina mandeha indray ny Aterineto any Chengdu
Vaky daholo ireo vazim-bonikazo sy hafa any Mianyang, nihozongozona ireo fampangiatsiahan-drano, trano maro no nirodana, samy nizotra nivory ery amorondrenirano daholo ny mponina.
Iray no maty ary valo ireo naratra mafy any amin'ny fivondronan'ny Lixian, sy Abazhou, any Sichuan. Namoaka fanambarana vonjy taitra ny governemanta tamin'ny 17:10 ora, nitsahatra tanteraka na ny seraseram-pimavoivoizana na ireo seraseram-pifandraisana any Wenchuan, sy Lixian ary Maoxian; maro ireo trano nirodana sy lalana tapaka ary olona naratra nohon'ny fihotsahan'ny tendrombohitra tany Heishui, sy Xiaojin, sy Ma'erkang, sy Songfan ary Jiuzaigou,
Tapaka ve ny rohim-pifandraisana Aterineto miridirdy [na backbone] aty Shina ? Nahoana ary aho no tsy afaka mampiasa Aterinetoa ?
SMS ihany sisa no azoko ampiasaina fa tsy afaka miantso n'iza n'iza any Xi'an intsony aho …
Alatsinainy 21:39 ora http://jiwai.de/jiangyh/statuses/8802154
Namoaka fampitandremana noho ny loza mihantona tamin'ny alalan'ny fanapariahana SMS sy Radio ary Fahitalavitra ny sampandraharaha mikasika ny horohorontany aty amin'ny faritry Henan, tamin'ny 15:48 ora : “Mampandre ny vohikalan'ny Sampandraharaha mikasika ny horohorontany fa androany tamin'ny 14:28 ora today disy horohorontany izay nahatratra 7.8 ny heriny tany Wenchuan, any amin'ny faritry Sichuan; Nitarika fahasimbana maro tamin'ny faritanintsika izany horohorontany izany fa tsy hisy fiantraikany amin'ny fiainantsika andavan'andro, ka ianagaviana mba tsy hisy hikoropaka isika vahoaka, efa eo am-pelatan'ny sampandraharaha mpiandraikitra azy ny raharaha ankehitriny …”
Ny navoiak ireo mpiasa rehetra tao amin'ny tranobem-panjakana miandraikitra ny herin'aratra any Zhengzhou
Alatsinainy 21:19 ora http://fanfou.com/statuses/LhifhcSKPXw
Tsy ho ela dia hanoatra ny horohorontany izay nitranga tany Tangshan tamin'ny taona 1976 ity horohorontany ity. Hatramin'izao aloha dia tsy ny sampandraharaha mikasika ny horohorontany na ny misahana ny famonjena ireo traboina no tena miasa fatratra sy manampy ireo ekipan'ny mpiasany fa ny foibe fampielezankevitry ny birao foibe [prôpagandy]
Mandeha tsara ny Aterineto any Hangzhou. Nivoaka eny ivelany ny ankamroan'ireo mponina.
5.7 horohorontany eo anelanelan'ny Jiaxing any min'ny faritanin'ny Zhejiang sy Shanghai. Tsy mbola misy olona re hoe naratra.
Nihontsona tokony ho sahabo 3° ny tranobe mijoalajoala World Trade Center any Ningbo!!!!!!!!
Sekoly Fanabeazana Fototra roa no indray nirodana any Chongqing, ankizy mpianatra efatra no namoy ny ainy
Wuchang : http://twitter.com/lenvow/statuses/809197185
Toerana maro any Hubei no nahatsapana ny horohorontany; misy faritra izay maha-marenina ireo finday any Wuchang.